Griezmann oo shaaca ka qaaday ciyaaryahan ka tirsan Arsenal uu rajeynayo inay ka wada ciyaaraan Barcelona – Gool FM
Griezmann oo shaaca ka qaaday ciyaaryahan ka tirsan Arsenal uu rajeynayo inay ka wada ciyaaraan Barcelona
Dajiye July 23, 2019
(Spain) 23 Luulyo 2019. Weeraryahanka kooxda kubadda cagta ee Barcelona Antoine Griezmann ayaa wuxuu shaaca ka qaaday magaca xiddig ka tirsan Arsenal, kaasoo uu rajeenayo inay ka wada ciyaaraan naadiga reer Catalonia mustaqbalka dhow.
Laacibka reer France ee Antoine Griezmann ayaa adduun dhan 120 milyan oo euro ay Barcelona kaga soo qaadatay suuqan xagaaga kooxda ay ku xafiiltamaan Spain ee Atletico Madrid.
Dhinaca kale Griezmann ayaa shaaca ka qaaday inuu ku dhawaaday ku biirista horyaalka dalka England ee Premier League waagii hore, laakiin wuxuu carabka ku adkeeyay in go’aankiisa uu ahaa inuu sii wato horyaalka Spain ee La Liga.
Antoine Griezmann ayaa wuxuu qiray inuu jeclaan lahaa ka garab ciyaarista kooxda Barcelona weeraryahanka Arsenal ee Alexandre Lacazette mustaqbalka, sababa la xiriira tayadiisa farsamo ee aad u sareysa, iyo sidoo kale saaxiibtinimada xoogan ee kala dhexeysa.
Griezmann ayaa wareysi uu ku bixiyay shabakada caanka ah ee “Sky Sports” wuxuu ku sheegay:
“Ciyaartoy ahaan, waxaan rabaa inaan ka garab ciyaaro Alexandre Lacazette, waa saaxiibkey xitaa garoonka banaankiisa, waxaanan ka wada ciyaarnay xulka qaranka France, Alexandre wuxuu leeyahay karti badan”.
Yeelkadeeda, Alexandre Lacazette ayaa si xoogan ugu dhwaaday ku biirista kooxda Atletico Madrid, markii uu ahaa ciyaaryahan ka tirsan Olympique Lyon sanadkii 2017, kahor inta aysan la wareegin saxiixiisa Arsenal, sababa la xiriira in FIFA ay xiligaas ka ganaaxday kooxda reer Spain diiwaangelinta ciyaartooyda.
Si kastaba ha ahaatee, weeraryahanka reer France ee Alexandre Lacazette ayaa u dhaliyay kooxda Gunners 36 gool 88 kulan oo uu usaftay Arsenal tartamada oo dhan.
WARBIXIN: 10-ka shaqsi oo ku lugta leh kubadda cagta ee aadka u neceb Cristiano Ronaldo!!
Neymar Jr oo fariin xun ka helay kooxda Barcelona